Sirdoonka UK Oo La Siiyay Haraagii Gabadhii Isku Qarxisay Hotel Central | Puntlandnow.com
Sirdoonka UK Oo La Siiyay Haraagii Gabadhii Isku Qarxisay Hotel Central
Feb 24th, 2015 – by Dr Ligle0
Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay jirka haweeneydii isku qarxisay hotel Central ay u gacan gelisay Sirdoonka Ingiriiska si ay baaritaan ugu sameeyaan iyadoo warar kala duwan ka soo baxayaan xaalada haweeneydaan iyo qaabka ay qaraxa u geysatay.
Madaxii haweeneydan oo kaamil ah ayaa ku dhacay hotelka kale ee Naasahablood IIm kaasoo ku dhegan hotelka qaraxu ka dhacay ee Centrale, waxaana la wareegay sirdoonka Soomaaliya, kadibna waxay u wareejiyeen saraakiil ka socota Ingiriiska oo saldhigoodu yahay Safaaradda Ingiriiska ee ku dhex taalla garoonka diyaaradaha Muqdisho, aagga Xalane iyadoo baaritaano ku sameyn doona si loo xaqiijiyo shaqsiyadeeda.
Haweeneydan ayaa ahayd qof ka timid dalka Holland oo sharci ay ka heysatay, waxaana ay hooyo u ahayd lix caruur ah oo min laba-laba mataane u ahaa sida uu sheegay wasiirka amniga dowladda Soomaaliya, waxaana la xiray dhammaan shaqaalihii kale iyo maamulkii hotelka Central.
Waxaa maanta Muqdisho soo gaaray Safiirka Holland u qaabilsan Soomaaliya Joost Reintjes iyo saraakiil la socota oo la sheegay inay iyaguna doonayaan ku lug lahaanshaha baaritaanka haweeneyda isku qarxisay hotelka Central, waxayna sida la sheegay dalbadeen inay ka qeyb qaataan baaritaanka kiiska iyo macluumaadka haweeneyda is qarxisay.
Si kastaba ha ahaate, Qaraxyadii mataanaha ahaa ee 20-kii Bishan ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa kuwii ugu qasaaraha badnaa in muddo ah oo sida qorsheeyayna ay waqti dheer qaadatay iyadoo soo bannaan bixisay heerka ay gaarsiisan tahay awoodda sirdoonka iyo qarax abaabulka Alshabaab.